Waa kuwee 5-ta qof ee Allah uusan u dambi dhaafi doonin? - MURAAYAD.COM
Waa kuwee 5-ta qof ee Allah uusan u dambi dhaafi doonin?
Waa inaad ogaato dadka noocaas ah si aadan uga mid noqonin.
Haddaba si aad u barato dadkaas, si tacaddar leh u akhriso maqaalkan, waxaana rajeyneynaa inuu kuu noqdo wacyi galin ku anfacda.
Xitaa dadka aad fikirka ku kala duwanaataan, ha u qaadin xumaan, qalbigaagana u nadiifi.
Cabitaan joogto loo cabo oo sababa nooc ka mid ah kansarka
5 Cunto oo farxad lagu helo: lambar 3 waad la yaabi doontaa